Madheshvani : The voice of Madhesh - १२ वटै वडालाई समेटेर रिङ्गरोड बनाउँछु : रामशंकर मिश्र
१२ वटै वडालाई समेटेर रिङ्गरोड बनाउँछु : रामशंकर मिश्र
मेयर, जलेश्वरनाथ नगरपालिका
० जलेश्वरनाथ नगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको विवाद के हो ?
— जलेश्वरनाथ नगरपालिकामा भएका सबै विवादहरू समाधान भएर सबै वडा अध्यक्ष र कार्यकारीका सदस्यहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । त्यस्तो नमिल्ने खालको विवाद छैन । कहिँबाट प्रयोजित ढंगले विवाद खडा गरिएको थियो तर हामी बीच त्यस्तो विवाद छैन र थिएन पनि ।
० निर्वाचित भएर यस नगरपालिकामा आउनुभएको पनि एक वर्ष भईसकेको छ, एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
— यो एक वर्ष त सिकाइमा नै बितेको मैले अनुभव गरेको छु । धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ । अझ केही कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ ।
० तपाईंहरूले निर्वाचनको समयमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुँदैछ ?
— २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय तहमा काम गर्न केही समस्या नै रहेको थियो । एक वर्षको अवधि योजना निर्माणमा नै बितेको छ । अब ती योजनाहरू कार्यान्वयन गरी नगरपालिकाको विकासमा ध्यान दिनेछु । यस नगरपालिका भित्र १८ किलोमिटर सडक ढलान भएको छ । उज्यालो नगर बनाउने तर्फ हामी उन्मुख भएका छौं । त्यसका लागि टावर लाईटहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरे अनुरूप स्तोन्नति गर्न अग्रसर छु ।
० त्यहाँका जनता नगरपालिकाको कार्यप्रति सन्तुष्ट छन् ?
— जनता पूर्ण सन्तुष्ट छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । अपेक्षा यति धेरै छ कि त्यो पूरा गर्न एक वर्षमा गरिने कामले पूर्ण हुन सक्दैन । जबसम्म जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गरेर हामी उनीहरूको नजिक पुग्न सक्दैनौ, तबसम्म जनतामा विचलन रहिरहन्छ ।
० तपाईहरूले गर्ने काममा समस्या के छ ?
— समस्या भनेको ठेकदारले समयमा काम नगरिदिने नै हो । सडक निर्माणको क्रममा घर भत्काउन वा अन्य संरचनाले अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छैन ।
० तपाईहरूले एक आर्थिक वर्षको बजेट चलाइ सक्नुभएको छ र दोस्रो आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ । पहिले के—के काम गर्नुभयो र अबको दिर्घकालीन योजना के छ ?
— मेन रोडको एउटा अवधारणा अगाडि आएको छ । जलेश्वर सबैभन्दा बढी बाढी प्रभावित क्षेत्र भएको हुनाले त्यसबाट जोगिन १२ वटा वडालाई नै समेटेर एउटा रिङ्ग रोडको निर्माण गर्न डिपीआर तयार भईसकेको छ । योजनाहरू निर्माण भइसकेको छ । बसपार्कको सौन्दर्यीकरण गर्ने तिर पनि हाम्रो दिर्घकालीन योजना रहेको छ । नगर योजना भन्ने पनि हाम्रो दिर्घकालीन योजना नै हो । सिँचाइको क्षेत्रमा खेत–खेतसम्म पानी पु¥याउन सक्यो भने धेरै ठूलो टेवा पग्छ । मधेश शिक्षामा एकदम पछाडि परेको ठाउँ हो, त्यसमा पनि हाम्रो नगरपालिका अत्यन्त कमजोर रहेको छ, त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने पनि हाम्रो दिर्घकालीन योजना रहेको छ ।
० शिक्षाको क्षेत्रमा मधेशको अवस्था एकदम दयनीय रहेको भन्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि के—कस्ता योजना छ ?
— यस वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौं । डे«सहरू वितरण गरेका छौं र शिक्षक समायोजनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौं । जुन शिक्षकले बालबालिकालाई उसको मनोभावना बुझेर अध्यापन गराउन सक्दैन, असक्षम छ उसलाई विभिन्न तालिम दिएर सक्षम बनाउने तर्फ पनि हामीले योजना ल्याएका छौं ।
० विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयभन्दा नीजि विद्यालय तर्फ बढी आकर्षित हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थालाई घटाउन र विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण गराउन कस्तो पहल रहेको छ ?
— सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेका छौं र धेरै विद्यालयहरूले त्यो निर्णयलाई पालन पनि गरेका छन् । नीजि विद्यालयहरूले जस्तो नीति अबलम्बन गरेर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्, सामुदायिक विद्यालयले पनि त्यस्तै नीति अपनायो भने विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नसक्छ । सस्तोमा शिक्षा पनि पाउन सकिन्छ । अहिले संघीय सरकारबाट माध्यामिक तहमा कम्प्युटर उपलब्ध गराएर कम्प्युटर शिक्षा दिने गरिएको छ । अब हामीहरूले नगरपालिकाबाट निमावि र प्राविमा पनि कम्प्युटर उपलब्ध गराएर कम्प्युटरको कक्षा सुरू गर्छाैं । जबसम्म आधुनिक शिक्षण प्रणाली सामुदायिक विद्यालयमा हुँदैन तबसम्म आकर्षण बढ्न सक्दैन । नीजि विद्यालयलाई चुनौती दिने खालको पढाई सामुदायिक विद्यालयमा हुने हो भने महँगो शुल्क तिरेर नीजि विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाइदैन ।
० धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको जलेश्वनाथ मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको लागि कस्तो योजना रहेको छ ?
— त्यहाँको विकास नहुनुको मुख्य कारण जग्गा नभएर हो । जलेश्वरनाथ मन्दिर अगाडि केही घरहरू रहेका छन् । ती घरहरूलाई हटाएर त्यहाँका मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँको जग्गा खाली गरेर पर्यटकहरूको लागि पार्किङको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
० जलेश्वर जिल्ला अस्पतालको अवस्था एकदम दयनीय छ यसको सुधारको लागि के छ योजना ?
— क्रमिक रूपमा होइन तत्काल नै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । अस्पतालको समस्या र अवस्थाका विषयमा मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका छौं । हामीलाई आश्वासन दिइएको छ । ५१ बेडसहितको अस्पताल बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । आइयुसी पनि छैन, त्यो पनि बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । अस्पतालको अवस्था सुधारको लागि प्रदेशले सहयोग नगरे पनि म आफ्नो नगरपालिकाबाट यो अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनेछु ।